IGWE NGOSI NLEKỌTA MAKWA NA FUTUREMARK - KAADỊ VIDIYO - 2019
Nyochaa kaadị vidiyo na Futuremark
Futuremark bụ ụlọ ọrụ Finnish nke na-emepe emepe maka nyochaa usoro iheomume. Ihe kachasị ama nke ndị mmepe bụ usoro 3DMark, nke na-enyocha arụmọrụ ígwè na ndịna-emeputa.
Ebe ọ bụ na isiokwu a na-emekọ kaadị vidiyo, anyị ga-anwale usoro a na 3DMark. Ihe ngosi a na-enye ọkwa maka usoro ntanetị dabere na ọnụọgụgụ isi ihe. A na-agụta ihe dịka algọridim mbụ si n'aka onye mmemme nke ụlọ ọrụ. Ebe ọ bụ na ọ bụghị n'ụzọ doro anya otú arụ ọrụ algorithm si arụ ọrụ, obodo ahụ nwere isi ihe maka ule, obodo ahụ na-akpọ "parrots". Otú ọ dị, ndị mmepe ahụ gara n'ihu: na-adabere na nsonaazụ nke ego ndị ahụ, ha wepụtara nhazi nke arụmọrụ nke ndịna-emeputa na ọnụahịa ya, mana ka anyị kwuo banyere nke a obere oge.
Ebe ọ bụ na a na-eme nyocha na kọmputa nke onye ọrụ ahụ, anyị kwesịrị ibudata usoro ihe omume ahụ site na saịtị ọrụ nke Futuremark.
Na isi peeji nke anyị na-ahụ ngọngọ na aha ahụ "3DMark" ma pịgharịa bọtịnụ ahụ "Download ugbu a".
Ihe nchekwa ederede nke nwere ngwanrọ dị ntakịrị karịa 4GB, ya mere, ị ga-echere ntakịrị. Mgbe nbudata faịlụ ahụ, ọ dị mkpa ịkwanye ya na ebe dị mma ma wụnye usoro ihe omume ahụ. Ntinye dị oke mfe ma ọ dịghị achọ nkà pụrụ iche.
Mgbe anyị kwusịrị 3DMark, anyị na-ahụ windo ndị dị na windo nwere ihe ọmụma gbasara usoro (nchekwa disk, processor, kaadị vidiyo) na aro iji mee nlele ahụ "Ọkụ Ọkụ".
Ihe omuma a bu ihe omuma ma weputara maka usoro egwu egwu. Ebe ọ bụ na kọmputa nyocha nwere ezigbo ike, anyị chọrọ ihe dị mfe. Gaa na ihe menu "Ule".
N'ebe a, anyị nwere ọtụtụ nhọrọ maka ịnwale usoro. Ebe ọ bụ na anyị na-ebudata ngwugwu ngwugwu site na saịtị ọrụ ahụ, ọ bụghị ha nile ga-adị, mana ihe dị ezuru. Họrọ "Ọkụ Eluigwe".
Ọzọkwa na windo ule ka pịa bọtịnụ ahụ. "Gbaa ọsọ".
Nbudata ahụ ga-amalite, mgbe ahụ, ọnọdụ ahụ ga-amalite na ihuenyo zuru ezu.
Mgbe ikiri vidio ahụ, ule anọ na-echere anyị: ihe osise abụọ, otu anụ ahụ na nke ikpeazụ - jikọtara ọnụ.
Mgbe enyocha nke ule, windo meghere ya na nsonaazụ. N'ebe a, anyị nwere ike ịhụ ọnụọgụgụ nke "perrots" nke usoro ahụ na-anata, nakwa ịhụ ihe nlepụta ndị ahụ dị iche iche.
Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ị nwere ike ịga na saịtị ndị mmepe ma tụnyere arụmọrụ nke usoro gị na nhazi ndị ọzọ.
N'ebe a, anyị na-ahụ nsonaazụ anyị na atụmatụ (karịa 40% nke nsonaazụ ya) na njirimara tụnyere nke usoro ndị ọzọ.
Kedu ihe nlele ndị a niile? Mbụ, iji tụnyere arụmọrụ nke usoro ihe nchọgharị gị na nsonaazụ ndị ọzọ. Nke a na-enye gị ohere ịchọpụta ike nke kaadị vidiyo, ịdị irè nke overclocking, ma ọ bụrụ na ọ bụla, na-ewebata otu mmewere nke asọmpi n'ime usoro.
Ụlọ ọrụ ahụ nwere saịtị nwere ebe ezigara ndị ọrụ na-arụ ọrụ benchmark. Ọ bụ dabere na data ndị a na anyị nwere ike inyocha ihe ntanetị anyị na-emepụta ihe ma chọpụta ihe GPU ndị kasị arụpụta.
Njikọ na peeji nke ọnụ ọgụgụ Futuremark
Uru maka ego - arụmọrụ
Ma nke ahụ abụghị ihe niile. Ndị mmepe nke Futuremark, dabere na ọnụ ọgụgụ ndị anakọtara, nwetara ọnụọgụ nke anyị kwurula na mbụ. Na saịtị ahụ a na-akpọ ya "Uru maka ego" ("Ụgwọ ego" na nsụgharị Google) ma dina ọnụ ọgụgụ nke isi ihe dị na 3DMark, nke kewara site na ọnụahịa ire ere nke obere vidiyo. Nke dị elu karịa uru a, uru ị na-azụ na-akwụ ụgwọ nke ọ bụla na-arụpụta, ya bụ, karia, nke ka mma.
Taa, anyị tụlere otu esi enyocha usoro ihe nchọgharị na-eji usoro 3DMark, ma chọpụta ihe kpatara ọnụ ọgụgụ dị otú ahụ.